Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeyb galaya caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Kenya – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeyb galaya caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Kenya
Madaxweynaha Soomaaliya iyo madax kale oo Afrikaan ah ayaa maanta ka qeyb galaya Munaasabad lagu caleema saarayo Madaxweynaha cusub ee Kenya Uhuru Kenyatta, kaasoo afartii bishii hore ku guuleystay doorasho muran dhalisay oo ugu dambeyn Maxkamada sare ee dalka Kenya ay ansixisay.
Xaflada caleema saarka oo ah mid labadii maalmood ee u dambeysay la qaban qaabinayay ayaa ka dhici doona Garoonka Ciidamada Cirka ee Moi, halkaasoo uu xilka madaxtinimada ku wareejin doono Madaxweynihii hore ee dalkaas Mwai Kibaki.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Madaxda lagu casuumay xaflada caleema saarka ayaa muhiimad gaar ah u ah, maadaama xiriirka labada dowladood uu iminka noqonayo mid bilow ah, maadaama dowlad cusub la soo doortay.
Sidoo kale Madaxweynaha Sudan Jen. Cumar Xasan Al-Bashiir oo ay doon dooneyso Maxkamada ICC ayaa ka mid ah mas’uuliyiinta lagu casuumay inay ka qeyb galaan munaasabada lagu caleema saarayo Madaxweynaha cusub ee Kenya Uhuru Kenyatta.
Kenya ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo ka qeyb qaadanaya howl galka nabad ilaalinta ee AMISOM, waxaana ciidamada kaga sugan yihiin magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubooyinka.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxay haatan dacwad uga socotaa Maxkamada ICC, kadib markii lagu soo oogay dacwad la xiriirta rabshadihii ka dhashay doorashadii Kenya ee sanadkii 2007-dii oo kumanaan dad ku dhinteen.
Xukuumada Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay sugeyso Ammaanka Culimada Soomaaliyed